Dubartootaaf qofaatti geejjiba qopheessuun caalaatti naga qabeessaa? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Maataatuun (taaksiin dhuunfaa) Naayiroobii keessatti mala geejjibaa namoonni hedduun itti fayyadamani dha.
Daandiiwwan Naayiroobii irratti 'Maataatuu' (minibaasota tajaajila taaksii kennan) muziiqaa sagalee olka'aa, kan halluu adda addaa itti dibameen gutamaa dha. Jiraattota miiliyoona 3 keessaa hedduun isaanii mala kanatti fayyadamu garuu, dubartoota hedduuf bakka miidhaan saalaa itti isaan mudatuudha.
Liin Baaraazaa obboleettii ishee waliin bakka awutobisii itti qabatan wayita deemteetti ture, gareen konkolaachiftoota 'Maataatuu' lamaanu humnaan konkolaataa keessa akka galaniif kan yaalan.
''Nu dhiibuu fi harka obboleettii kootii harkisuu jalqabani, daa'ima laphee irratti baattulleen ni harkisan.
''Isaanis waan koorniyaadhaan wal qabatu gaarii kan hin taaneen nu arrabsan."
''Akka nu dhiisaniifan itti hime, achiniis namni nu deeggaru akka hin jirre gaafan baru boo'uun jalqabe.
''Obboleettiin koos dhugumatti sodaattee turte.''
Akka carraa ta'ee Liin fi obboleettiin ishee qaamaan hin miidhamne, garuu muuxannoon isaanii gaarii hin turre.
Dubartoota Keeniyaa 381 qorannoon irratti taasifame keessaa, baay'inni isaanii miidhaan koorniyaa waliin wal qabatu iddoo geejjibaatti irra gahuu isaa ibsaniiru.
Qorannoon dhaabbata 'miidhaa saalaa daandii irratti raawwatamu haa dhaabnu' jedhu tokkoon taasifames argannoo wal fakkaatuun imaltoonni dubartootaa Paariis %100 yoo xiqqaate al tokko miidhaan saalaa tajaajila geejjiba uummataa irratti akka isaan qunname ni dubbatu.
Goodayyaa suuraa Jaappaan keessatti dubartoota qofaaf geejjibni jira, garuu imala isaanii naga qabeessa godhaniiruu?
Tajaajilli geejjibaa dubartoota qofaa haala kana ni jijjiiraa?
Namoonni siyaasaa muraasni dubartootaaf kophaatti geejjiba dhiheessuun furmaata qabaata jedhu.
Meeksiikoo hanga Jaappan, akkasumas Hindii keessatti bifa Baasii, baabura fi taaksiitiin biyyoota hedduu keessatti yaalamaniiru. Garuu, jireenya dubartootaa naga qabeessa akka godhan ragaan ni jiraa?
Sababoota adda addaatiif kana safaruun rakkisaa dha.
Miidhaan saalaa geejjiba uummataa irratti dubartoota irratti raawatamaniis yeroo hedduu hin gabaafamani. Yoo gabaafamanis, biyyoota hedduu keessaatti ragaan sun ifa hin taasifamu.
Dubartoota adda baasuun sababoota aadaatiif ta'uulleen, biyyoonni hedduun geejjiba dubartoota qofaa kan eegalan, miidhaan saalaa hedduu waan jiruufiidha.
Magaalonni kunneen osoo tajaajila kan hin jalqabiin dura miidhaan cimaan gahaa waan tureef ta'uus danda'a.
Kana gochuuf karaan tokkichi jiru, haala duraan ture fi erga geejjibni dubartootaa dhufee booda kan jiru wal bira qabuun ilaaluu dha. Kana gochuufis ragaan jiru gadi aanaa dha.
Ragaan kun kan Tookiyoo qofatti
Bara 2004tti sararawwan baaburaa hedduun furgoowwan dubartoota qofaa qabatan beeksisaniii ture.
Waggaa tokko boodas, yakki dubartoota irratti raawwatu %3'n hir'atus, erga tajaajila geejjibaa dubartoota qofaa fidanii miidhaa saalaa irra ga'e gabaasuun garuu %15-20, sararawwan baaburaa lama irratti dabalee ture.
Dubartoonni dhiiroota malee yoo imalan nageenyi akka itti dhaga'amu beekamaa dha.
Rooyitars bara 2014 qorannoo dubartoota adduunyaa 6,300 irratti taasiseen, %70'ni qofaa yoo imalan nageenyi akka itti dhaga'amu ibsaniiru.
Firiin qorannoo kanaa biyyaa biyyatti adda addummaa guddaa qabu ture. Fiilippiinsi Maaniillaatti dubartoonni %94 geejjibni qofaatti osoo ta'ee yoo filatan, Niiwyoorkitti ammoo %35 qofaatu kana filatan.
Qorannoodhumti kun magaalota gurguddoo adduunyaa 16 dubartoonni itti imaluuf rakkisoo ta'an sadarkaadhaan kaa'ee jira.
Magaaloota shan keessaa isaan duraa afur- Bogootaa, magaalaa Meksikoo, Dahiliifi Jaakaarataa dha. Isaan keessattis tajaajila geejjibaa dubartoota qofaaf kennamu eegalanii jiru.
Goodayyaa suuraa Liin Baaraazaa: ''Namni nu gargaaru akka hin jirre nan bare''
Rakkinicha atatamaan furuuf:
Geejibni dubartoota qofaaf tajaajila kennu sammuu isaaniif nagaa kenna yoo ta'e yaaluun gaarii hin ta'uu?
Muuxannoon ishii akkuma jirutti ta'ee, Liin akkasitti hin yaaddu.
Kana mannaa, rakkoo kana jijjiiruuf hawaasni miidhaa saalaan wal qabatee raawwatamuuf obsa dhabuu qaba/hin ta'u jechuu qaba jechuun yaaddi.
Dubartoonni nagaan yoo imalanillee, yeroo konkolaataa irraa bu'an qoccolloon saalaa isaaniirra ga'u waluma fakkaataa ta'a yoo kaanimmoo hammaachuus ni danda'a.
Imaammanni sirriitti hojiirra akka hin oolle Liin qofaa miti kan dubbattu.
Beektonni fi ogeessonni imaammata geejjiba dubartootaa adda baasuun furmaata hatattamaa kan fiduu fi miidhaa dubartoota irra ga'u kan sirreessuu kan jedhu irratti wal falmaniiru.
Warrii badii raawwatan akka ilaalcha isaanii jijjiiran gochuu dhiifanii, dubartoonni qoccolloo isaaniirra ga'u ofiif akka qolatan irraa akka eegnu taasisa.
Viidiyoo Ispoortiin dubartootaa waliin rakkoo qabaa?